Benza njani abaviwa uMongameli kuThengiso lwe-imeyile | Martech Zone
Unyulo oludlulileyo, ndenze impazamo yokuthumela amanye amanqaku ezopolitiko kule bhlog. Ndabamba indlwane ye-hornet kwaye ndeva malunga nayo emva kweenyanga. Ayisiyo ibhlog yezopolitiko, yibhlog yentengiso, ke ndiza kugcina izimvo zam kum. Ungandilandela kuFacebook ukuze ndibone umlilo. Oko kwathethi, ukuthengisa sisiseko salo lonke iphulo.
Kule phulo sibona uDonald Trump egungxula inja yemidiya yemveli njengengcali yokwenyani. Ebesematheni iminyaka kwaye uyayiqonda indlela yokwenza abantu bathethe ngaye. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo oko kuyasebenza njengabanye abagqatswa beRiphabhlikhi bonke bawile ecaleni kwendlela. Ngelixa oko kwakha ukungaziwa, akunakuphumelela iphulo.
I-imeyile iye yaba ngumgcini-sango we-intanethi yethu. Cinga ngale ndlela, zingaphi iifom kunye neenkonzo esizibhalisela ukufaka i-imeyile yethu? Oku kuyenzile i-imeyile, ukuba isetyenziswe ngokuchanekileyo, esinye sezixhobo zokuthengisa ezisebenzayo zalo naliphi na ishishini, njengoko kubonisiwe ngokucacileyo kwidatha yethu yophando. Kubantu abaninzi nangona kunjalo, ezi zinto zenze ukuba i-imeyile ichithe ixesha kunye nemibutho yombutho. Kungenxa yoko le nto sidale Imeyile ka-Alto, ukunceda abasebenzisi be-imeyile ukulawula ngokulula kunye nokulandelela zonke iibhokisi zabo zeposi. UMarcel Becker, uMlawuli oyiNtloko weMveliso kwi-AOL
Sele silubonile unyulo oluncinci luhamba apho intengiso yedijithali ngaphambili yayiyeyona nto ibalulekileyo. Kwikota yakhe yokuqala, iqela lika-Mongameli u-Obama laqhuba umdlalo womhlaba owakha eyona mininzi yolwazi yabanikeli kunye nezopolitiko kwimbali. Iqela lephulo likaBernie Sanders ngokucacileyo lilandele umzekelo wakhe. Ngelixa uSanders engazukuphumelela eyona nto iphambili, isiseko sedatha sakhe saboneleli sivelise isixa esikhulu semali, konke oku kunyuswe kancinci. Kwaye wenza oku ngelixa uHillary Clinton wayenofikelelo kwiziko ledatha leDemokhrasi kangangexesha elide phambi kokuba iqela liyeke ulawulo kubo bobabini abagqatswa.
Amagqabantshintshi okusetyenziswa kwabaviwa be-imeyile
UHillary Clinton ukhokela ipakethe Imirhumo ye-imeyile. I-46% yabaphenduli babhalisile kumkhankaso we-imeyile kaHillary Clinton vs 39% kaBernie Sanders kunye ne-22% kaDonald Trump.
I-imeyile isetyenziswa ikakhulu kwi khulisa imali. Ngaphezulu kwesiqingatha semeyile yomkhankaso wabagqatswa (iipesenti ezingama-57) ijolise ikakhulu kwiminikelo. I-59% yabaphenduli abaye baxela ukunikela kwiphulo likaHillary Clinton bacengwa ukuba benze njalo nge-imeyile, xa kuthelekiswa ne-19% yabaxhasi bakaDonald Trump.
I-imeyile kunye neMithombo yeendaba yeNtlalo zezona zamkela kakhulu amajelo entengiso, Abaphenduli baxela i-imeyile (18%) kunye nemithombo yeendaba zentlalo (19%) njengeyona ndlela bayithandayo yokufumana ulwazi ngephulo.
Lunyulo olunomdla kwindlela yokuthengisa. Ngelixa amazinga okuvunywa angathandekiyo kwaye abagqatswa kubonakala ngathi bayabaleka kwizikhundla ze-centrist, amaqondo okuphendula ngokusebenzisa iindlela zemveli nezidijithali azikho kwitshathi. Kuyakonwabisa ukubona impembelelo yomdlalo ngamnye wentengiso yomviwa oza ngoNovemba. Imeyile yeAlto idityanisiwe le infographic kwidatha.
tags: ibernie sandersuDonald trumpIminikeloukhethoclintonimaliinyathelo lezopolitikoiminikelo yezopolitikoumongameliunyulo lukamongameli